Ababoneleli bempahla abakhuselayo kunye neFektri- Abavelisi bempahla abakhuselayo baseTshayina
Ukusebenza kwesithintelo Indlela yokuvavanya, indawo yokubonisa isampulu kunye nokuhlelwa kokusebenza komqobo wokukhusela iimpahla kubonisiwe kwiTheyibhile 1. Jonga le theyibhile ingezantsi ngezona ndawo ziphambili zengubo eyahlukileyo. Isithintelo sotywala sibhekisa kwisinxibo esikhuselayo kwezonyango kufuneka sikwazi ukuthintela ukungena kwamanzi, igazi, utywala kunye nolunye utywala, ngaphezu kwamanqanaba ama-4 e-hydrophobicity, ukuthintela intsholongwane ephethwe ngegazi lesigulana, ulwelo lomzimba kunye nobunye ubushushu obosulela isifo abasebenzi bezonyango. ...
Uhlobo lweNkcenkceshelo yokuNxiba: Uhlobo lokulahla inkunkuma Indawo yemvelaphi: FuJian, China ubukhulu: I-XS / S / M / L / XL / 2XL Igama lemveliso: Isicelo sokunxiba esikhuselayo esisetyenziselwa ukukhulisa intsholongwane, ukuhlala yedwa, uthuli kunye ne-ventilation, umsebenzi wangaphandle, ubhubhane woluntu Uthintelo, ukungasasebenzi kwesikolo, njl. njl. Chwetheza kwaye usebenzise iindawo 1) Uhlobo olungafakwanga inzala ...
Uhlobo lweNkcenkceshelo yokunxiba: Uhlobo lokulahla inkunkuma Indawo yemvelaphi: FuJian, China ubukhulu: I-XS / S / M / L / XL / 2XL Igama lemveliso: Ukhuselo lweNkxaso yokuNxiba: uKwazi malunga ne-3000 / iziqwenga zempahla ngosuku Izinto ezikhuselayo zempahla 1. Ikliniki elahliweyo. Isikhuseli senziwe ngezinto eziphezulu zomgangatho. Inomsebenzi wokulwa intsholongwane, ukuphefumla, uthintelo lwe-osmosis, ukuthintela ukungafumani manzi, kwaye ayibikho mthethweni. 2. Isikhuseli-kliniki esilahliweyo esikhuselayo sibonisa ukuba ...
UkuBonelela ngoKubonelela ngoBonelelo: ii-3000 zeepisi / iipasile zemihla ngemihla kwiimpawu ezikhuselayo zokukhuseleka 1. Isuti esichazayo sokukhuseleka senziwe senziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu. Inomsebenzi wokulwa intsholongwane, ukuphefumla, uthintelo lwe-osmosis, ukuthintela ukungafumani manzi, kwaye ayibikho mthethweni. 2. Isikhuselo sonyango esilahliweyo sikulungele ukusinxiba xa sibonisa ubungqina bamanzi kunye neempawu ezinokuphefumla. 3. Ukufudumeza ukutywinwa kweklinikhi yerabha yekliniki kwenza elona nqanaba liphezulu lokukhusela. 4. Mde yena ...
Iindonga ezingafakweli manzi
Ixesha lokuKhokela: Ubungakanani (iiziqwengana) 1 - 10000> 10000 Est. Ixesha (iintsuku) 7 Ukuxoxwa ngeempawu zokhuselo ezikhuselayo 1. Isuti ekhuselweyo yekliniki yenziwa ukusuka kumgangatho ophezulu wezinto eziyinxalenye. Inomsebenzi wokulwa intsholongwane, ukuphefumla, uthintelo lwe-osmosis, ukuthintela ukungafumani manzi, kwaye ayibikho mthethweni. 2. Isikhuselo sonyango esilahliweyo sikulungele ukusinxiba xa sibonisa ubungqina bamanzi kunye neempawu ezinokuphefumla. 3. Ukushisa ukutywina iklinikhi yerabha yekliniki ...
Iimpawu zokhuselo 1. Umda ojikelezwe ngumthungo kugcina ukusebenza kokungalawuleki kolwelo 2. IHood enomda we-elastic 3. I-cuffs okanye ii-cuffs eziqiniweyo ziyazikhethela ngokuzithandela 4. I-band elastified kunye namaqatha 5. I-armhole ebanzi yokuthwala okuphezulu kunye nokuthuthuzela ngexesha lokusebenzisa 6. Akukho manzi ukukhutshwa 7. I-Ergonomic 3-piece hood 8. Isinqe esigciniweyo sokulunga okulungeleleneyo 9. Indawo yendawo yendawo yokuhlala isetyenziselwa ukufuya intsholongwane, ukuhlala yodwa, uthuli kunye ne-ventilation, umsebenzi ongaphandle, intlekele yendawo yoluntu ...
Iimpawu zokukhusela ezikhuselayo 1. Isuti ekhuselayo yekliniki yenziwa ukusuka kumgangatho ophezulu wezinto eziyinxalenye. Inomsebenzi wokulwa intsholongwane, ukuphefumla, uthintelo lwe-osmosis, ukuthintela ukungafumani manzi, kwaye ayibikho mthethweni. 2. Isikhuselo sonyango esilahliweyo sikulungele ukusinxiba xa sibonisa ubungqina bamanzi kunye neempawu ezinokuphefumla. 3. Ukufudumeza ukutywinwa kweklinikhi yerabha yekliniki kwenza elona nqanaba liphezulu lokukhusela. 4. Ubomi obude beshelufu kwaye kulula ukuyilahla, buyenza ibe yindawo enobuhlobo. & ii ...
Uhlobo lweNkcenkceshelo yokuNxiba: Uhlobo lokulahla inkunkuma Indawo yemvelaphi: FuJian, China ubukhulu: I-XS / S / M / L / XL / 2XL Igama lemveliso: Ukhuseleko loKukhuthaza ukuKhutshwa kweSinxibo: isi-3000 isiqwenga / iziqwenga zemihla ngemihla Isicelo esisetyenziselwa ukuzala iintsholongwane, ngokubanzi ukwahlula-hlula, uthuli kunye ne-ventilation, umsebenzi ongaphandle, ukuthintela ubhubhane ekuhlaleni, ukubulala iintsholongwane esikolweni, njl.
Uyisebenzisa njani ngokufanelekileyo impahla ekhuselayo? Ukusetyenziswa kwesinxibo esikhuselayo kuhambelana kakhulu nobomi bethu kunye nempilo, ngoko ke kubalulekile ukukhetha iimpahla zokhuselo ezihlangabezana neemfuno ezisemgangathweni. Okwangoku, ezonaimpawu zaziwayo ziDupont zaseMelika, Merika Lakeland, 3M, Sperian, njalo njalo. Emva kokufumana iimpahla zokukhusela, ukusetyenziswa ngokuchanekileyo kubaluleke ngakumbi. Ukubonakala koyilo lokuFuneka Impahla ekhuselayo iya kuba yome, icoceke kwaye ingabikho ...
Ukhuseleko lomzimba ofanelekileyo
Iimpawu zokukhusela ezikhuselayo 1. Isuti ekhuselayo yekliniki yenziwa ukusuka kumgangatho ophezulu wezinto eziyinxalenye. Inomsebenzi wokulwa intsholongwane, ukuphefumla, uthintelo lwe-osmosis, ukuthintela ukungafumani manzi, kwaye ayibikho mthethweni. 2. Isikhuselo sonyango esilahliweyo sikulungele ukusinxiba xa sibonisa ubungqina bamanzi kunye neempawu ezinokuphefumla. 3. Ukufudumeza ukutywinwa kweklinikhi yerabha yekliniki kwenza elona nqanaba liphezulu lokukhusela. 4. Ubomi obude beshelufu kwaye kulula ukuyilahla, buyenza ibe yindawo enobuhlobo. Sebenzisa ...
Impahla yokuKhusela iMichiza